सरकारले काठमाडौंमै बनाउन सकेन आइसोलेसन, संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे - ParyatanBazar.com
सरकारले काठमाडौंमै बनाउन सकेन आइसोलेसन, संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे
भदौ ४,काठमाडौँ। बेलैमा पूर्वतयारी गर्न नसक्दा सरकारलाई अहिले उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ।
‘दैनिक २ सय संक्रमित थपिए र १४ दिन राख्नपर्‍यो भने २८ सय आइसोलेसन बेड चाहिन्छ। त्यस्तै ४ सय थपिए भने ५ हजार ६ सय वटा बेडले पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले अभाव हुँदैन। यहीँ अवस्थामा संक्रमित संख्या स्थिर भयो भने धान्न सकिन्छ।’
जनस्वास्थ्यविद् डा. समिरमणि दीक्षित भन्छन्, ‘सरकारले ‘प्रोएक्टिभ’ भएर काम गर्नुपर्थ्यो तर हाम्रोमा समस्या आएपछि मात्र एक्सन लिने बानी छ। काठमाडौंजस्तो ठूलो जनघनत्व भएको ठाउँमा जोखिमको पहिल्यै आँकलन हुनुपर्थ्यो तर सरकार यसमा चुकेको छ।’
‘मन्त्रालयमा रहेका विज्ञहरूले कस्तो सुझाव दिइरहनुभएको छ? उहाँहरूले यति सामान्य कुराको आँकलन पहिल्यै गरेर पूर्वतयारी गर्नुपर्ने होइन?,’ उनले आक्रोश पोखे।
दीक्षितले सरकारले बाहिर रहेका विज्ञहरूको सुझाव नसुनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। सरकारले अप्ठेरो परेपछि मात्र बहिरका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको भन्दै उनले भने, ‘हामीसँग प्रत्येक हप्ता छलफल गरे हुन्न? खालि गाह्रो भएपछि मात्र छलफलमा बोलाउने गरिएको छ। दुई महिनामा एकपटक छलफल गरेर के हुन्छ?
डा. दीक्षित भन्छन्, ‘सरकारले भोलि संक्रमण फैलिए वा नफैलिए पनि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। पहिले यत्रो समय थियो। अनि अहिले आएर हतारमा सबै कुरा गरिँदैछ। मैले अघि पनि भने हाम्रो समस्या थुप्रिएपछि मात्र एक्सन लिने बानी छ।’
‘धेरै छलफलहरू चलिरहेका छन्। औपचारिक निर्णय नभएकाले ठ्याक्कै भन्न नसकिएको हो। तर सबै कुरालाई चुस्त र व्यवस्थित पार्दै लैजाने भनिएको छ,’ उनले भने।
अहिले भने उपत्याकामा समुदायस्तरमै रहेका मानिसहरूमा संक्रमण देखिन थालेको छ। जसले गर्दा उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको देखिन्छ। विज्ञहरूले समेत काठमाडौं कोरोनाको ‘नयाँ हटस्पट’ बन्नसक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।